Maxkamadda Militariga oo xukuntay askartii dishay Gudoomiyihii Degmada Hodan | Dhacdo
Home Wararka Maanta Maxkamadda Militariga oo xukuntay askartii dishay Gudoomiyihii Degmada Hodan
Maxkamadda Militariga oo xukuntay askartii dishay Gudoomiyihii Degmada Hodan
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa maanta soo saartay go’aan maxkamadeed ku aaddan xukuno kala duwan oo lagu riday Saraakiishii iyo Ciidamadii Booliska ee lala xiriirinayay dilka Gudoomiyihii hore ee Degmada Hodan ee Maamulka Gobolka Banaadir, Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise (Dhegajuun).
Maxkamadda Ciidamada oo 24-kii bishii April bilowday dhageysiga kiiskan ayaa soo maray marxalado kala duwan, intii ay dhageysiga Maxkamadda socotay.
Maxkamadda ayaa marka hore ku dhawaaqday in dilka aanu ku talagal ahayn, oo si shil ah uu u dhacay.
Maxkamadda ayaa shan xabso oo xabsi ciidan ah ku xukuntay Taliyihii Saldhigga Booliska ee Degmada Howlwadaag, Gaashaanle Shuceyb Cabdi Maxamed, bacdamaa uu ka gaabiyay waajibaadkii loo igmaday iyo inuu sahlay baxsashada mid ka mida ilaaladiisa, oo dilkaasi ku lug lahaa. Maxkamadda ayaa shan sano oo xabsi ciidan ku xukuntay Dable Bishaar Axmed Cabdi, oo xukunkiisa lagu sababeeyay taxadar la’aan iyo baxsashadiisa.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa sidoo kale min laba sano oo xabsi ciidan ah ku riday askarta kala ah Jamaal Isxaaq Cali, Dhiblaawe Ibraahim Yuusuf, Faarax Sabriye Afrax iyo Kulmiye Kaariye Cali.
Dhanka kale Maxkamadda ayaa xukuntay dhammaan eedeysaneyaasha inay bixiyaan magta marxuumka iyo mag dhaw-siinta Ibraahim Abuukar Cismaan iyo Liibaan Xasan Liibaan oo shilkaasi ku dhaawacmay.
Gudoomiye Dhegajuun ayaa 21-kii bishii January lagu dilay inta u dhaxeyso Isgoysyada Howlwadaag iyo Aadan Cadde ee Degmada Howlwadaag, ka dib markii la rasaaseeyay gaarigiisii.
Previous articleWafdi u tagay Beledweyne joojinta dagaal beeleedyada ka soo cusboonaday
Next articleDhalooyin badan oo qamri oo lagu qabtay Magaalada Boosaaso